Funda ukuba ungathengisa njani ngo-2021 kunye neNzuzo kwiMiqondiso yeeDrafti zaSimahla zaMihla ngemihla 🥇
UMboneleli oPhambili weSignali yeHlabathi
Iimarike zehlabathi ezandleni zakho
nanini na, naphi na
Joyina iTelegram yethu yeeMpawu eziSimahla!
Iveki ngeCrypto Roundup
I-BTC, i-ETH, i-XRP kunye ne-LTC ye-Outlook
I-78.77% yeeakhawunti zentengiso zeCFD zilahlekelwa yimali
Ukuya kuthi ga kwi-10 echanekileyo, imiBoniso eziNenzuzo ngosuku
Ukufikelela ngokulula kwi-Forex kunye neeMpawu zeCrypto
Uhlalutyo lobugcisa lwemihla ngemihla kunye neengcebiso zokuthengisa
Uluntu olungaphezulu kwe-15,000 yabarhwebi abasebenzayo
Izilumkiso zexesha lokwenyani, konke ngeTelegram!
Joyina iqela leTelegram
Izilumkiso kwangoko kwi-imeyile yakho
Phakathi kwe4-5 ichanekile, imiqondiso enenzuzo ngosuku!
NgoLwesihlanu, Oktobha 1, 2021
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 1,900, $ 1,950, $ 2000 Amanqanaba okuxhasa aphambili: $ 1,750, $ 1, 700, $ 1,650 Gold (XAUUSD) yexesha elide Ukuhamba kwecala kuyaqhubeka ukusukela ngoJulayi. Nge-1,830 kaSeptemba, abathengi baphinde bachasa ngaphezulu kweedola ezili-2 kwaye baphoswa. Imakethi ibise […]
NgoLwesine, Septemba 30, 2021
Njengoko iDola igaya ukwenyuka okuxhaswe sisivuno kule veki, ukuthengisa ingqalelo kutshintshele kwi-Euro, ngakumbi kwiimarike ezinqamlezileyo. Okwangoku, ukwanda kweemvakalelo zomngcipheko kunceda iimali zorhwebo kunye ne-Sterling, ngedola yase-Australia ekhokela ipakethi. Kwimeko ezinzileyo yomngcipheko, i-yen kunye ne-Swiss franc zihlala zibuthathaka. Izinga lentswela-ngqesho kwi-Eurozone […]
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Septemba 30 Ngexesha leseshoni yaseMelika, i-AUDUSD yafumana ukubambeka kwaye yenyuka yaya kwi-0.7257, iphakamileyo elitsha lemihla ngemihla elixhaswe kukuhla kwedola yaseMelika ebanzi. I-DXY yehla nge-0.20 yepesenti, iphawula okokuqala ukuba iye yehla kulandela iintsuku ezine zokufumana. Ngaphandle kwezivuno ezizinzileyo zase-US kunye ne-US engalinganiyo […]
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 0.45, $ 0.46, $ 0.47 Amanqanaba aphambili enkxaso: $ 0.25, $ 0.20, $ 0.15 DOGE / USD yeXesha elide $ 0.20 inkxaso. Ngaphambi kokuwa kwexabiso kutshanje, ixabiso le-DOGE laqhekeka ngaphantsi kwenkxaso ye- $ 0.21, layiphinda ngaphambi kokuphinda uqalise ukwehla. Okwangoku, […]
Ingxelo entsha epapashwe yiBhanki yokuHlaliswa kwaMazwe ngaMazwe (i-BIS) kunye neqela leebhanki ezingoovimba bathi imali yedijithali inokukhuthaza ukuhlaliswa kwabantu ngokukhawuleza kunye nokuhanjiswa okungabizi kakhulu. Malunga neeveki ezimbini ezidlulileyo, umphathi we-Bank of International Settlements (BIS) Innovation Hub, u-Benoît Cœuré, uqinisekise ukuba iibhanki ezingoovimba mazithathe igunya kwaye […]
Uhlalutyo lwe-USDJPY-Ixabiso liyaqhubeka ukuya phezulu ukuya phezulu njengoko i-Momentum inyusa i-rally ye-USDJPY iyaqhubeka njengoko isantya sokunyuka sonyuka. Abathengi bazuze esi sikhundla emva kokukhanyisa ikhandlela kufutshane ne-109.100 kwinqanaba eliphambili. Iinkunzi ke ziye zonyusa uxinzelelo, kwaye intengiso iyaqhubeka nokunyuka phezulu. Ixabiso, nangona kunjalo, lisetelwe ukufikelela […]
USodolophu waseMiami, eFlorida-uFrancis Suarez-ukholelwa ukuba ukuqhekezwa kwe-Bitcoin (BTC) kunye ne-cryptocurrency ngurhulumente wase-China lithuba elibalulekileyo kwimarike yaseMelika yokuthatha ithuba. Usodolophu, ngoku osebenza ekwakheni isixeko sakhe kwiziko leBitcoin, uxelele iBloomberg ukuba: “Indawo yotshintsho ngoku. Yenza into engakholelekiyo […]
Ukuchukumisa isiseko kunye ne-CYCE, ithokheni yokwaphula umhlaba ye-ERC-20 eya kuthi iguqule indlela esicinga ngayo malunga ne-cryptocurrency. Lishishini laseTurkey leCrypto Carbon Energy's yokuqala inyathelo le-blockchain, kodwa kuye kwinqanaba eliphezulu. Ngenjongo yokulwa noTshintsho lwemozulu yeHlabathi, i-CYCE ifuna ukwenza inguqu kumandla ahlaziyekayo ukusuka […]
Uhlalutyo lwamaxabiso olungatshintshiswanga- Septemba 30 Ixabiso linokungena kwinqanaba lokumelana ne- $ 26 kwaye inyuke iye kumanqanaba oxhathiso lwe- $ 30 kunye ne- $ 37. Ukungakwazi ukungena kwinqanaba lokumelana ne- $ 26 ziinkunzi kunokubangela ukurhweba okuthe kratya okanye ukubuyela umva kumanqanaba enkxaso kwi $ 21, $ 17 kunye ne- $ 14. Intengiso yeUNI / USD […]
Ikhadi leMali eliPhambili
I-Advanced Cash, nesifinyeziweyo njenge-AdvCash, ngumbutho wentlawulo obanzi owabakho ngo-2014. IKomishoni yeeNkonzo zezeMali yaMazwe ngamazwe yaseBelize ilamkele eli qonga lokuhlawula. Ngapha koko, le nkqubo ikwadityaniswa neWave Crest Holdings Limited, eyaziwayo kuluntu lwekhadi leBitit. Eli qonga libonelela ngenkonzo ebalulekileyo kuye wonke umntu onxulumene noko […]
Rhweba ngeemarike kunye
IZIMPAWU ZE-FOREX EZINGCONO
landela yethu Iimpawu zasimahla ze-Forex kwii-cryptocurrensets, iimveliso kunye nee-indices
Khuphela abathengisi ababalaseleyo
Amathuba okuthengisa ngokubamba kunye Abathengisi abaphambili be Forex
Funda ukuThengisa iiQhinga le-Forex kunye neendaba
ABASEBENZI BENKQUBO &
Isikhokelo sokugqibela kubarhwebi be-Forex
Ngaphandle kwamathandabuzo, umthengisi udlala indima ebalulekileyo kwimarike ye-Forex. Kodwa njengomqali, uyayiqonda into yokuba yeyiphi indima edlalwa ngabarhwebi? Funda eyethu Isikhokelo sabarhwebi be Forex apha ukwazi ezona ndima ziphambili zomthengisi we Forex.
Ukufunda iiRhafu zoMdla
Funda ukuRhweba ukuba usaqala kwihlabathi le yorhwebo ntengisongokuqinisekileyo uye endaweni elungileyo. Iwebhusayithi yethu iya kukuxhobisa ngazo zonke izixhobo ezifunekayo ukuze ufumane umsebenzi wakho wokurhweba kunyawo lwasekunene.
Ukurhweba kwabaQalayo: Umsebenzi weNtengiso ye-Intanethi usebenza njani?
Ukukhetha uMrhwebi okwi-Intanethi
Ukuze uthengise nge-Intanethi, kuya kufuneka usebenzise umthengisi. Kudala ziintsuku apho kufuneka ubeke khona uthengise kwaye uthengise iiodolo kwifowuni kunye nesitokhwe sakwaNtu.
Oku kunokuza ngendlela yokunciphisa iifizi zokurhweba kunye nokusasazeka okunamandla, okanye izinto ezinje nge 'Copy Copy'. Kwelinye icala, oku kwenza ukuba kube nzima kakhulu ukuba wazi ukuba leliphi iqonga lokurhweba kwi-Intanethi onokuthi ubhalise nalo.
Ulikhetha njani iqonga lokuthengisa kwi-Intanethi?
Ukubonelela ngeenkonzo zokurhweba kwi-Intanethi kubathengi abathengisa ngokusekwe e-UK, ii-brokers kufuneka zilawulwe liGunya lokuZiphatha kwezeziMali (i-FCA). Kananjalo, le yimfuno engavisisaniyo xa kuziwa ekukhetheni iqonga elitsha.
Ngapha koko, abanye abathengisi bayakuvumela ukuba usebenzise i-e-wallet enjengePayPal okanye iSkrill, nangona oku kungasoloko kunjalo. Ukongeza, uninzi lwabarhwebi luxhasa ukuhanjiswa kweebhanki. Nangona oku kuhlala kuvumela imida ephezulu, ukuhanjiswa kweebhanki lolona khetho lucothayo.
🥇 Imirhumo nokusasaza
Kuya kufuneka ukuba uthathele ingqalelo malunga nenani, kunye nohlobo lwezixhobo zemali ezibanjwe ngumrhwebi. Kwiimeko ezininzi, amaqonga orhwebo akwi-Intanethi aya kugubungela i-forex kunye neeCFD. Ngokumalunga neyangaphambili, kulapho uthenga kwaye uthengise iimali, ngombono wokufumana inzuzo ngokuhamba okuncinci kwamaxabiso.
Kwimeko yee-CFDs (ikhontrakthi-yomahluko), oku kukuvumela ukuba uqikelele phantse kulo naluphi na udidi lweeasethi, ngaphandle kokufuna ukuba ngumnini weasethi. Umzekelo, ii-CFDs zikuvumela ukuba urhwebe nantoni na evela esitokhweni nakwizabelo, igolide, ioyile, irhasi yendalo, ii-indices zemarike yemasheya, amaxabiso enzala, ikamva, kunye ne-cryptocurrensets.
Kungcono usebenzise umthengisi obeka ugxininiso olomeleleyo kwizalathi zobugcisa. Ezi zixhobo zikuvumela ukuba uhlalutye amaxabiso asembalini kwinto ephambili. Ngokwenza njalo, ume elona thuba lihle lokuvavanya ukuba ulwalathiso lwe-asethi yakho oyikhethileyo liza kuya phi.
Iimpawu ezaziwayo zobuchwephesha zibandakanya ii-oscillator ze-stochastic, imilinganiselo ehambayo (MA), isalathiso samandla esihambelanayo (RSI), kunye namaqela ebollinger. Ekugqibeleni, kuya kufuneka ukhethe amaqonga orhwebo akwi-Intanethi anikezela ngeendlela ezininzi zobugcisa.
Vula iAkhawunti ngeQonga lokuRhweba kwi-Intanethi
✔ Inkcukacha zimntu
✔ Ulwazi ngeNgqesho
✔ Ukuma kwezeMali
✔ Amava oRhwebo lwangaphambili
Amakhadi okuTsala kunye neKhadi letyala
Nangona ingaqhelekanga kunedebhithi / ikhadi lekhredithi okanye ukuhanjiswa kwebhanki, inani labarhwebi abatsha ngoku lamkela ii-e-wallets. Oku kubandakanya ukuthanda iPayPal, iSkrill, kunye neNeteller. Iidipozithi ze-E-Wallet azikho simahla kuphela, kodwa kwiimeko ezininzi, zikuvumela ukuba urhoxise imali yakho kwelona xesha lifanelekileyo.
Ukuba usaqala kwilizwe lokurhweba kwangaphambili, kuya kucetyiswa ukuba unamathele kwizibini eziphambili. Kungenxa yokuba ii-majors zihlangana namanqanaba asezantsi okunyanzeleka, ukusasazeka okuqinileyo, kunye neemfumba zokuthengiswa kwemali
🥇 Izinto ezingaqhelekanga
Usebenza njani urhwebo lwe Forex?
You Ukuba uyakholelwa ukuba imali ibekwe kwi icala lasekhohlo esi sibini siza Nyusa Ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i thenga iodolo.
You Ukuba uyakholelwa ukuba imali ibekwe kwi kwicala lasekunene esi sibini siza Nyusa Ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i thengisa iodolo.
Umzekelo wo 'Thenga' kwiNtengiso ye-Forex
Ixabiso le-GBP / USD okwangoku yi-1.32
Ubeke i- £ 500 yokuthenga i-odolo
Ukunyuka kwe-GBP / USD kuye kwi-1.34, nto leyo ethetha ukuba i-GBP iya isomelela xa ithelekiswa ne-USD
Oku kubonisa ukwanda nge-1.51%
Inzuzo yakho iya kuba yi- £ 7.55 (£ 500 x 1.51%)
Umzekelo wo 'Thengisa' kwiNtengiso ye-Forex
Ubeke i- £ 1,500 yokuthengisa iodolo
I-GBP / i-USD iyancipha ukuya kwi-1.29, okuthetha ukuba i-USD iya isomelela ngokuchasene ne-GBP
Oku kubonisa ukwehla kwe-2.27%
Inzuzo yakho iya kuba yi- £ 34.05 (£ 1,500 x 2.27%)
Funda ukuthengisa iiCFDs
Izitokhwe kunye neeZabelo
✔️ Izinyithi ezinzima
✔️ Iidijithali zemali
Isebenza njani iCFD Trade?
You Ukuba uyakholelwa ukuba iasethi iya ku Nyusa Ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i elide umyalelo.
You Ukuba uyakholelwa ukuba iasethi iya ku kuncipha Ngexabiso, kuya kufuneka ubeke i mfutshane umyalelo.
Ukuba ujonge ukurhweba kwisitokhwe ixesha elide, uya kuba ulungile xa uthenga ii-equity zakho ozikhethileyo kumthengisi-sitokhwe oqhelekileyo. Kungenxa yokuba uya kuba nezitokhwe ngokuthe ngqo, oko kuthetha ukuba uya kujwayela kuluhlu lokhuseleko lwabatyali mali.
Ukurhweba ngoShishino lomntu ngamnye
Ukurhweba kwi-Index yeeNtengiso zeStock
Umzekelo wokusasazeka kwii-CFD
Ukhangele ukuba uhambe 'ixesha elide' kwioli
Umrhwebi wakho unikezela ngexabiso 'lokuthenga' le- $ 71
Ixabiso 'lokuthengisa' yi- $ 69
Oku kuthetha ukuba ukusasazeka ngumahluko phakathi kwe- $ 69 kunye ne- $ 71
Ngokwepesenti, oku kukusasazeka kwe-2.89%
You Ukuba uya elide kwioyile, kuya kufuneka uhlawule $71. Ukuba ukhawuleza uphume endaweni yakho, uya kwenza njalo ngexabiso lokuthengisa $69. Kananjalo, udinga ixabiso leoyile ukuze Nyusa by 2.89% Ukuqhekeza nje.
You Ukuba uya mfutshane kwioyile, kuya kufuneka uhlawule $69. Ukuba ukhawuleza uphume endaweni yakho, uya kukwenza oko ngexabiso lokuthenga $71. Kananjalo, udinga ixabiso leoyile ukuze kuncipha by 2.89% Ukuqhekeza nje.
Ukuzixhobisa zombini sisixhobo esinomdla kwaye siyingozi kakhulu oya kusifumana kwiindawo ezininzi zokurhweba kwi-Intanethi. Ngamafutshane, amandla okuvumela ukuba uthengise kumanqanaba aphezulu kunaleyo unayo kwiakhawunti yakho yomrhwebi. Ixabiso elithile limiselwa yinto, enje nge-2: 1, 5: 1, okanye 30: 1. Iphakamileyo into, kokukhona uthengisa kunye kwaye ke- iphezulu inzuzo okanye ilahleko yakho iya kuba.
Imida yokuphakanyiswa kwe-ESMA
🥇 30: 1 kwizibini eziphambili ze-forex
🥇 20: 1 Kwizibini ezingezizo eziphambili ze-forex, igolide, kunye neendices eziphambili
🥇 10: 1 Izinto zorhwebo ngaphandle kwegolide kunye nee-indices zee-equity
🥇 5: 1 kwisitokhwe ngasinye
🥇 2: 1 Imali yeemali zedijithali
IiOdi zeMarike: Zintoni kwaye zisebenza njani?
Ukuba ufuna ukufunda ukurhweba kwi-Intanethi, kubaluleke kakhulu ukuba uyazi ukuba zisebenza njani iiodolo zentengiso. Ngokusisiseko, oku kuyakuvumela ukuba uvale ngokuzenzekelayo urhwebo xa amaxabiso athile ehlaselwa.
Umzekelo, ukuba urhwebo luya kukunceda, unokuqinisekisa inzuzo ngokuvala urhwebo ngokuzenzekelayo. Simiaillly, ukuba urhwebo luchasene nawe, i-odolo yentengiso inokuphuma kurhwebo kwaye ke-ukunciphisa ilahleko.
Apha ngezantsi sidwelise ezinye zezona odolo zibalulekileyo zentengiso ekufuneka uzazisile.
✔️ I-Order Stop-Loss Order
Njengoko igama libonisa, i-odolo yokuyeka ilahleko iya kunciphisa ukubonakaliswa kwakho kurhwebo olulahlekileyo. Umzekelo, masithi ucinga ngeBitcoin, kwaye uvula urhwebo olunexabiso le- $ 2,000 ngexabiso lokuthenga le- $ 9,500.
Kananjalo, unethemba lokuba ixabiso leBitcoin liyonyuka. Nangona kunjalo, ubeka i-odolo yokuyeka ilahleko kwimeko yokuba izinto zichasene nawe. Njengoko awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-5% yexabiso lakho lokurhweba, ubeka i-odolo yokulahleka kokuyeka kwi- $ 9,025.
Kwiintsuku nje ezimbalwa emva koko, iBitcoin itanki kwaye ilahleka nge-20% ngexabiso. Ekuqaleni, ubuya kuphulukana ne- £ 400 (20% yorhwebo lwakho lwe- $ 2,000). Nangona kunjalo, njengoko ufakele ukulahleka okunokumisa ngengqondo kwi- $ 9,025, uyinciphisile ilahleko yakho ukuya kwi- £ 100 nje (5% ye- $ 2,000).
I-odolo eQinisekisiweyo yokuPhulukana nokulahleka
Isebenza ngokuchanekileyo njenge-odolo yokulahleka kokuma, akukho siqinisekiso sokuba i-odolo yakho iya kugcwaliswa. Umzekelo, ukuba ubeke i-stop-loss order kwi-GBP / USD ngexesha lesiphumo sereferefti se-Brexit, akunakulindeleka ukuba i-odolo ifumane umthengi. Kungenxa yokuba i-GBP / i-USD idlule kwixesha lokungazinzi okukhulu.
Ngokuchasene noko, i-odolo 'eqinisekisiweyo' yokumisa ilahleko iya kuhlala ihambelana, kuba sisivumelwano phakathi kwakho nomrhwebi. Qaphela, kuyakufuneka uhlawule umrhumo ophezulu wokwenza i-odolo yokulahleka kokuyeka, nangona kunjalo, kunokuba kufanelekile ukuhlawula.
Thatha -Inzuzo yeNkxaso
Ngelixa kubalulekile ukukhusela urhwebo lwakho ekubeni lubekelwe bucala kwiilahleko ezinkulu, kuya kufuneka usete iodolo yokuvala ngokuzenzekelayo urhwebo xa usenza inzuzo. Ngaphandle koko, unokuphoswa lithuba lokutshixa ngaphakathi xa ungekho kwisixhobo sedesktop. Kananjalo, ii-odolo zenzuzo ziya kuvala urhwebo ngexabiso elichazwe kwangaphambili.
Umzekelo, ukuba uthengisa isilivere kwi-18.24 yeedola, kwaye unqwenela ukungena ngaphakathi xa i-asethi inyuka nge-10%, unokubeka i-odolo yenzuzo kwi-20.06. Ukuba ixabiso liye lafika kwi-20.06 yeedola, urhwebo luya kuvalwa ngokuzenzekelayo ngenzuzo ye-10%.
Fumana imiqondiso yeVIPIdiphozithi $ 50 yokufumana iiFree Free Forex Signals zonyaka omnye! Urhwebo kwi-MT4 ngeXabiso ukuya kuthi ga kwi-1: 500!